Izinhlobo zezinambuzane zenyama | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo zezinambuzane zenyama
Unogwaja wezinyama: uhlobo oluhle kakhulu
Ubufakazi bokuqala benogwaja njengezilwane ezifuywayo zenziwa esikhathini esidlule, emuva ezikhathini zasendulo. Lokhu kwaziwa eRoma lasendulo eminyakeni engaba ngu-2000 edlule. Ukuzaliswa kwalezi zilwane endaweni yezimboni kwaqala kuphela emakhulwini amabili eminyaka edlule. Namuhla, isayensi iyazi mayelana nezinhlanga ezingu-700 zogwaja, kodwa unyaka wonke le namba ikhuphuka ngenxa yezinguquko ezihlukahlukene zemvelo noma ukuhlukunyezwa kwezilwane.
I-NZK: incazelo, izici, izithombe, ukunakekelwa nokugcinwa kwezinogwaja abomvu eNew Zealand
Ukufunda mayelana nezinhlobo zezilwane ezahlukene, ngokuvamile ngegama ungakwazi ukuqagela ukuthi bavelaphi. Kodwa uma kwenzeka onogwaja abomvu baseNew Zealand - akunjalo. Unogwaja waseNew Zealand, okuzoxoxwa kamuva, uvela eCalifornia, eU.SA. Uzofunda kabanzi mayelana nonogwaja waseNew Zealand kanye nokuchazwa kohlobo ngokufunda lesi sihloko.
Izimbuzi ze-Rabbit zaseFrance: izici zokuzala ekhaya
Unogwaja uyisilwane esincane esithokozisayo esingasitholakala ngendima yesilwane. Kulesi sikhundla, uhlobo lokuqala lwawo onogwaja, inqama yesiFulentshi (noma i-lop-eared), ibonakala kahle. Isilwane sinomzimba omuhle, uhlamvu oluzolile futhi aludingi izindleko ezinkulu zesondlo.
I-hyplus unogwaja: indlela yokunakekela nokuthi ungondla kanjani ekhaya
Enye yamakilasi anenzuzo namhlanje ukuzalanisa unogwaja. Ibhizinisi cishe liyizidakamizwa, ngoba kubaluleke kakhulu kokubili inyama nesikhumba semfuyo. Ngenye yezinhlobo zenyama, kodwa kunalokho hybrid cross-country Hyplus sizoxoxa ngalesi sihloko. Incazelo kanye nezici ezihlukile Isici esivela kuzo zonke izinhlobo ze-hybrids ukuhluleka ukukhiqiza inzalo, kepha ama-Hyplus abesifazane ashintshaniswa ukusabalalisa ngokweqile.
Imikhiqizo enogwaja esheshayo: ama-broilers
Abalimi bavame ukubiza uhlobo lwe-broiler lwezinogwaja olungcono kakhulu, ngoba lezi zilwane ziveza inyama eningi. Namuhla sizokhuluma ngezinzuzo zokuzalana onogwaja abanjalo, izinhlobo zabo eziyinhloko kanye nezinto eziqakathekileko zokuqukethwe kwabo. Izinzuzo zokuzalisa onogwaja be-broiler Ukukhula kwe-broiler, noma, njengoba kubizwa nangokuthi, inyama onogwaja inenzuzo eningana: ukuzala okunempilo - owesifazane ngokuvamile uletha kusuka ezinyangeni ezingu-7 kuya ku-9 zanogwaja baby; ukuvuthwa okusheshayo kwenzalo, kufinyelela ekukhuleni okuhle nesisindo ngezinyanga ezingu-4; onogwaja banesizotha esikhule kahle, ngenxa yokuthi intsha ikhuliswa ngaphandle kobunzima obunzima; ikhono lokusebenzisa onogwaja abavuthiwe ngokocansi lokubambisana, kungakhathaliseki ukuthi kwenzekani; okuqukethwe okungavumelananga - bangakhula emasethini amashini; ukusetshenziswa okuphansi kokudla, ngoba usebenzisa ama-2.5 kilogremu kuphela okudla, ungathola u-1 kilogram wesisindo esibukhoma sogwaja.
I-pannon emhlophe yombala: ukuzala, ukunakekelwa nokudla
Kuzo zonke izinhlanga zanogwaja zasemakhaya, i-pannon emhlophe iphuma ekukhiqizeni kwayo kanye nezinkomba ezinhle zokukhiqiza. Lona uhlobo lwezinyosi, okuyinto, ngokunakekelwa okufanele, kuzokuvumela ukuba uthole inyama enhle futhi ithenda ngendlela eningi kakhulu. Izici zokuqukethwe zalawo onogwaja, sibheka esihlokweni.
I-jikol rabbit: izici ezizalisayo ekhaya
Amapulazi amaningi amancane angasese namapulazi amakhulu akhiqiza onogwaja bezinhlobo zenyama. Kulo gatsha lokulondoloza izilwane, ikhwalithi yohlobo oluhlwanyelwe kubaluleke kakhulu njengenzuzo esheshayo yesisindo. Lo mhlaba ugcwele ngokugcwele uhlobo lwe-French hybrid of onogwaja, i-chicol. Incazelo kanye nezici ze-hybrid Breed Chicol iyabaluleka ngenxa yokuthola isisindo sayo esisheshayo, ngakho-ke umgomo oyinhloko wokuzalanisa la onogwaja kuyinto inyama yokudla ephezulu kakhulu.
Indlela yokutshala onogwaja ngenyama
Ihlaya elidala elaziwa ngokuphathelene "noboya obuyigugu kuphela, kodwa futhi nama-kilogram amabili noma amathathu enyama" alilahlekelwe ukufaneleka kwalo. Unogwaja uqiniswa ngokubili kokuthola izikhumba, nokuthola inyama enomusa yokudla. Ubuningi bomlenze awunjengokufunwa njengenyama, ngakho-ke kulesi sihloko sizogxila ekutheni inyama ikhunjulwe.
Incazelo kanye nemikhakha yezinto ezakhiwa onogwaja bezakhi zohlobo
Ukuze ube no-onogwaja, okokuqala, udinga ukuzijwayeza ngemithetho yesondlo, ukudla, ukunakekelwa nokuzalana. Ukukhethwa kohlobo lomvundla kuncike enjongweni yokuthenga. Kulesi sihloko sizocubungula izici kanye nemithetho yokuzalisa isihlobo esikhulu saseJalimane saseMotley. Imvelaphi ye-German variegated giant, i-butterfly yaseJalimane, umakhi kanye namanye amagama amaningi kunalesi sizukulwane.